Tu Tu Tha: အထာဘိရေ
Wednesday, August 26, 2009 | Labels: အမှတ်တရ |
This entry was posted on Wednesday, August 26, 2009 and is filed under အမှတ်တရ . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
Can guess your mind from your writing style. I love your blog.
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ post လေးးး
ကိုနောင်ကြီး မွေးနေ့တရာ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာ တိုင်ပါစေ..။
အမကော အမအကိုပါ ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေဗျာ
အနောင်ဆိုပြီး ကာတွန်းဆွဲတဲ့ တစ်ယောက်လားဗျ...။
ကိုနောင်တယောက် ကျန်းမာပြီး အသက်ရှည် ပျော်ရွှင်ပါစေ...
(ကာတွန်းဆွဲတဲ့ အနောင်က တူးတူးသာရဲ့ ပါပါကြီးပါဗျ... ကိုဘွိုင်းက ရောကုန်ပြီ...)
မောင်နှမတွေအကြောင်း ဖတ်ရတာ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ...။